DOCX NA PDF IHE NTỤGHARỊ ONLINE - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
DOCX tọghata na PDF online
Ndị na-emepụta ụlọ na-edozi EasyAlbum, ọrụ kachasị ya bụ iji nyere ndị ọrụ aka ịmepụta foto. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọnụ ọgụgụ ọrụ na ọrụ dị ntakịrị, usoro ihe omume ahụ na-ewe obere ihe dịka megabyte nke diski diski ike. Ntugharị dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ndị na-amalite.
Ọkachamara Ntọala foto
Onye ọrụ na-ekere òkè mgbe ihe okike dị ntakịrị, naanị ịkwesịrị ịhọrọ ọnụọgụ ndị dị mkpa, bulite foto ma gbakwunye ụda. Nke ọ bụla window na aka ekpe na-egosi ihe ngosi nke nwere ike inyere ndị na-emeso ụdị software maka oge mbụ.
Window mbụ gbanwere ọdịdị nke album ahụ, họrọ foto maka mkpuchi ma gosipụta ọnụ ọgụgụ nke ngalaba. Ị nwere ike bulite foto na-enweghị njedebe na nke ọ bụla n'ime ha, ma enwere ike inwe ihe karịrị mpaghara atọ n'onwe ha; n'oge ngosi ha na-edegharị iche iche.
Na windo na-esote, ị na-ahọrọ oge nke ihe nkiri slide ahụ, oge ngosi nke ọ bụla na-egosi, na ntinye akwụkwọ ntanetị. Naanị otu ihe na - akpata nsogbu - enweghịzi usoro nhazi nke oge maka igosipụta otu ibe.
Ọzọ, onye ọrụ kwesịrị iji bulite foto gaa na ngalaba ma ọ bụ ngalaba, dabere na ihe e kwuru na windo mbụ. Anyị na-akwado ịhọrọ oke nchekwa na ihe oyiyi n'otu oge, usoro ihe a ga-enyocha ihe niile wee họrọ faịlụ kwesịrị ekwesị. Na otu nhọrọ ahụ dị iji lee foto niile eburu na album.
Mgbe i mechara usoro nhazi niile, a ga-akpanye gị na menu ihe omume. N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ ngalaba iji lee ma ọ bụ nanị mechie usoro ihe a wee kwaga nchekwa na DVD. Iji malite ihe ngosi slideshow "Aga n'ihu".
EasyAlbum nwere ihe ọkpụkpọ ya, nke na-egosiputa foto ebudatara ma gbakwunye ya. N'okpuru ebe a, enwere obere bọtịnụ nchịkwa ngosi. A na-arụ ọrụ aka nri ụfọdụ atụmatụ ndị arụnyere na ndabara.
Họrọ egwu egwu
Enweghị nhọrọ egwu ndabere na ọkachamara ntọala ọkpụkpọ, nke bụ ntakịrị azụghachi. Enwere otu nhọrọ - budata egwu egwu na ihe egwu ahụ mgbe ị na-ele ihe ngosi ahụ. N'ezie, EasyAlbum bụ ihe ọkpụkpọ nke otu ụlọ ọrụ ahụ wuru. Naanị faịlụ MP3 ga-egwu.
Ọnụnọ ọkachamara ntọlite ​​ọrụ ahụ.
Ịnweghị ike itinye egwu ndabere;
Enweghi nchịkọta foto.
EasyAlbum bụ usoro dị mfe dị mfe nke na-adị mfe ịmụta, ọbụnakwa ndị na-enweghị ahụmahụ nwere ike ịmepụta ha onwe ha ngwa ngwa. Ịnwere ike ibudata ya na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị mmepe.
Download obere ihe n'efu maka n'efu
Foto foto HP Image Mpaghara Photo Foto Bipute Pilot Onye na-ede foto
EasyAlbum na-enye ndị ọrụ obere ngwaọrụ na ọrụ ndị nwere ike ịme iji meepụta ihe ngosi site na foto ndị ebudatara.
Onye Mmepụta: dị ka nna-ukwu